Duqeymo diyaaradeed oo ka dhacay Gobolka Hiiraan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Duqeymo diyaaradeed oo ka dhacay Gobolka Hiiraan
MAREEG 29 November 2015 29 November 2015
Baladweyne ( Mareeg)-Ilo wareedyo ku sugan Gobolka Hiiraan ayaa ku soo warramaya in diyaarado dagaal ay duqeymo ka fuliyeen Gobolka Hiiraan.
Meelaha la duqeeyay ayaa waxaa ka mid ah Tuulooyinka Yasooman , Ceeldheer iyo Ceel lahelay kuwaas oo dhammaantooda ay ku sugan yihiin Ururka Al Shabaab.
Mid ka mid ah Saraakiisha Ciidanka Dowladda Federaalka Soomaaliya ee Gobolka Hiiraan oo lagu Magacaabo Col Max’ed Cumar Aadan Gaduudow ayaa sheegay in duqeymaha bartilmaameedkoodu ahaa xarumo Al Shabaab ay ku sugan yihiin ayna waxyeello xoogan ka soo gaartay.
Ma jiro dhinaca Al Shabaab wax war ah ay oo ay ka soo saareen duqeymaha ka dhacay Gobolka Hiiraan ee saldhigyadooda lala fiirsaday.
#Galkacyo:Madaxtooyada Putland oo war ka soo saartey dagaalka mudug
R/wasaare sharma’are iyo madaxda maamul Goboleedyada oo gaarey Gaalkacyo